ဘော်ဒါတွေစုပြီး တစ်ယောက်ကို(၄၉၅၀)ကျပ်ပဲကျသင့်မယ့် Package တွေနဲ့ တဝတပြဲစားနိုင်ဖို့……. – FoodiesNavi
ဘော်ဒါတွေစုပြီး စားသောက်ဆိုင်ဒိုးကြဖို့ ကြံနေပြီဆိုရင်တော့ မင်မင်အခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဆိုင်လေးနဲ့ ကွက်တိဖြစ်မှာကျိန်းသေပဲ။ မင်မင်ပြောပြပေးမယ့်ဆိုင်လေးက ၃ယောက် / ၆ယောက်/၈ယောက်ဆိုပြီး Package လိုက်တွေသွားစားမှ တွက်ချေကိုက်မယ့်ဆိုင်လေးဆိုတော့ ဘော်ဒါတွေကို ကြေညာမောင်းခတ်ပြီး လူစုထားဖို့တော့လိုမယ်နော်။ Package နဲ့စားမယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်(၄၉၅၀)ကျပ်တည်းနဲ့ အဝအပြဲစားနိုင်မယ့်ဆိုင်လေးပါ။ ဒီလိုစားနိုင်မယ့်နေရာလေးကလည်း ပါချီပါချပ်ဆိုင်လေးမဟုတ်ဘူးနော်။ အင်းလျားလမ်းပေါ်က ” The Bar burDubai-Inya ” မှာပါ။
ပင်လယ်စာအပါအဝင်အသားဟင်းနှစ်မျိုးကို (Curry/Fried/Salad) စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီး အသီးအရွက်နှစ်မျိုး(Fried/Salad) ရွေးရတယ်။ ပင်လယ်စာကတော့ ၆ယောက် package စပြီးပါတာ။ ဟင်းတွေအနေနဲ့ဆို ဝက်ဂျင်းမွှေးကြော် ၊ ကြက်ကြွပ်ချဉ်စပ် ၊ ငါးရှဉ့်ငရုတ်ကောင်းစတာတွေ ၊Fried အနေနဲ့ကတော့ လယ်ကြက်ကလေးကြော်ချက် ၊ ငါးရှဉ့်ခြောက်စပ် ၊ အမဲခြောက်စပ်မွှေး စတာတွေ ၊ အသီးအရွက်တွေအနေနဲ့ကတော့ ငွေနှင်းမှိုအစပ်ကြော် ၊ ထိုင်ဝမ်မုန်ညင်းကြော် ၊ ဝက်ခေါက်ကိုက်လန်စတာတွေ ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ soup တစ်မျိုးလည်းစိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရတယ်။ ဂျပန်တို့ဟူးပဲကြာဆံဟင်းချို ၊ တုန်ယမ်းဟင်းချို ၊ အပ်မှိုဟင်းချို ၊ နံရိုးချဉ်စပ်ဟင်းချို ၊ ကြက်ခြေထောက်ချဉ်စပ်ဟင်းချို ၊ ကြံမဆိုင်ဟင်းချိုတွေရနိုင်တယ်။ (၈)ယောက် package မှာတော့ soup ထဲမှာ ပင်လယ်စာပါတယ်။ ထမင်းကတော့ မို့မို့မောက်မောက်လေးတွေ တစ်ယောက်တစ်လုံးရနိုင်တယ်။
ဟင်းပွဲတွေကလည်းအကြီးကြီးပဲ Package နဲ့လိုက်တဲ့ ဟင်းပွဲကြီးတွေပြင်ဆင်ပေးထားတာမို့ အဝတီးဖို့သာပြင်ထားလိုက်တော့။ Soup အိုးကြီးဆိုလန့်စရာကြီးရယ် ကုန်အောင်တောင်မသောက်နိုင်ဖြစ်သွားမယ်။ အရသာကလည်းလုံးဝရှယ် ? တစ်ပွဲဆိုတစ်ပွဲအရသာထူးခြားမှုတွေကို မျက်မြင်တွေ့ကြုံရမှာအသေအချာပဲ။ ၅၀၀၀လောက်နဲ့ဒီလိုတွေရှယ်စားနိုင်တာကလည်း လုံးဝကိုတန်မှတန်ပဲ။ ဘော်ဒါတွေစုပြီးသွားစားနိုင်ဖို့အတွက် ဆိုင်လိပ်စာကို မြေပုံလေးနဲ့ပြပေးမယ်နော်။